ငါ SSD အပေါ်တစ်ဦး SWAP ဖိုင်လိုအပ်သလား - SSD ကို - 2019
MKV နှင့် AVI အဓိကအားဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ဒေတာများပါဝင်သည်ထားတဲ့လူကြိုက်များမီဒီယာကွန်တိန်နာဖြစ်ကြသည်။ အများစုအတွက်ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာမီဒီယာပလေယာနှင့်ပြည်တွင်းကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကို formats နှင့်အတူအလုပ်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က MKV က c သာအနည်းငယ်ပြည်တွင်းကစားသမားများအလုပ်မလုပ်ဖို့။ ထို့ကြောင့်, နေတုန်းပဲသူတို့ကိုအသုံးချသူကိုလူတို့အဘို့, မေးခွန်းများကို DivX က AVI မှ MKV convert ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲခြင်း options များ
ထိုအကို formats converting အားလုံးသည်နည်းလမ်းများနှစ်ခုအဓိကအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: တစ် converter ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြောင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။ အထူးသဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည်ထို program name ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နည်းလမ်းတွေအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Xilisoft Video Converter
ဗီဒီယိုကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့သို့အသွင်ပြောင်းဘို့တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာလျှောက်လွှာက AVI မှ MKV convert အပါအဝင်ထောက်ခံသည် Xilisoft Video Converter ဖြစ်ပါတယ်။
Xilisoft Video Converter ကို run ။ လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ဖိုင်တစ်ခု, စာနယ်ဇင်းထည့်ရန် "Add" ထိပ် panel က။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ roller အဆိုပါ MKV format နဲ့ထားရှိရာအရပ်သို့သွားပါကတံဆိပ်ကပ်နှင့်စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
ဒါဟာ data တွေကိုတင်သွင်းဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမယ်။ သူမ၏အမည်အားထည့်သွင်းဖိုင်ကိုဖြည့်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက် Ksilisoft Video Converter ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။
ယခုတွင်သင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းဖျော်ဖြေသောပုံစံကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လယ်ပြင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုယ်ရေးဖိုင်"အောက်ခြေမှာတည်ရှိပါတယ်။ ပေါ်လာစာရင်းမှာ tab ကိုမှ navigate "မီဒီယာ format နဲ့"။ ကို select လုပ်ပါစာရင်း၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်း, "က AVI"။ ထိုအခါလက်ျာဘက်၌, ပုံစံများ၏ရွေးချယ်မှုများထဲကတစ်ခုရွေးပါ။ ဤအမှု၏အရိုးရှင်းဆုံးဟုချေါသညျ "က AVI".
တစ်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရှေးခယျြထားပြီးနောက်, သင်ပြောင်းလဲ output ကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွဲထားတဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကအထူးသ, ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်ကြောင်း directory ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကလယ်ပြင်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်လိပ်စာ "ရည်ရွယ်ချက်"။ အချို့အကြောင်းပြချက်ဆိုပါကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ဖြစ်လျှင်, သငျသညျကိုက်ညီမပါဘူး " ... Browse".
window directory ကို run နေ select လုပ်ပါ။ သင်အရာဝတ္ထုကိုကယ်တင်ချင်ရှိရာ folder ကိုရွေ့လျား၌ပြစ်မှားမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းများ "folder ကိုရွေးချ".
သင်တို့သည်လည်းအုပ်စုအတွင်းပြတင်းပေါက်၏ညာဘက် pane ထဲကကိုအပိုဆောင်း setting များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် "ကိုယ်ရေးဖိုင်"။ ဒီနေရာတွင် destination သည်ဖိုင်, ဗီဒီယိုဘောင်အရွယ်အစား, အသံဘစ်နှုန်းနှင့်ဗီဒီယို၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ settings တွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မလိုအပ်ပါ။
အဲဒီ settings တွေကိုပြုမိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်စတင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အများအပြားနည်းလမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင် program ကိုပြတင်းပေါက်၌စာရင်းထဲတွင်ပစ္စည်းလိုချင်သောအမည်သို့မဟုတ်အရေအတွက်က tick နှင့်ကို click နိုင်ပါတယ် "Start" အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်။
သငျသညျ (လည်း, ထိုစာရင်းထဲတွင်ဗီဒီယို name ကို click နှိပ်ပြီး Right-click နှိပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်PKM) ထိုစာရင်းကိုချတစ်စက်ကနေ select လုပ်ပါ "(s) ကိုရွေးချယ်ထားသောဒြပ်စင်ပြောင်း" သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာ function ကို key ကိုနှိပ် F5.
ဤအလုပ်ရပ်များမဆိုက AVI အတွက် MKV ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်သည်။ ယင်း၏တိုးတက်မှုလယ်ပြင်၌ရှိသောသော graphical display ကိုထံမှမြင်နိုင်ပါသည် "အခြေအနေ"တစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြသကြောင်းဒေတာ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသေတ္တာထဲတွင်ဗီဒီယို၏နာမတော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်, ပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက် "အခြေအနေ" တစ်ဦးကစစ်ဆေးမှတ်အစိမ်းရောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရလဒ်မှတိုက်ရိုက်၏ညာဘက်သွားကြဖို့ "ရည်ရွယ်ချက်" မဆိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
Windows Explorer ကို ဒါဟာအရာဝတ္ထုက AVI format ကိုပြောင်းနေပါတယ်ရာအရပ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ သငျသညျကိုယျတျောနှငျ့ (စသည်တို့ကိုကြည့်ရှု, တည်းဖြတ်,) ထပ်မံအရေးယူအချိန်ဖြုန်းဖို့, သူ့ကိုရှာတွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းရဲ့အားနည်းချက် Xilisoft Video Converter လုံးဝ Russified နှင့်အခပေးထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။
Method ကို 2: Convertilla
AVI မှ MKV ပြောင်းနိုင်သောအောက်ပါဆော့ဖ်ဝဲလ်များ, ကသေးငယ်တဲ့အခမဲ့ Convertilla converter ဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပြေး Konvertilly ပါစေ။ သငျသညျပြောင်းချင်သော MKV file ကိုဖွင့်လှစ်ရန်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာကနေဆွဲယူနိုင်ပါတယ် ဉီးစီး ပြတင်းပေါက် Convertilla ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် source code ကိုနှင့်ပစ်လွှတ် window ကိုဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ယင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း" ၏ညာဘက်မှ "ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်ဒီမှာ video file ကိုဆွဲယူ".
မီနူး၏ခြယ်လှယ်ဖျော်ဖြေဖို့ပိုနှစ်သက်သူများသည်အသုံးပြုသူများအလျားလိုက်စာရင်းထဲတွင် click နှိပ်နိုင်ပါတယ် "File" နောက်ထပ် "ပွင့်လင်း".
ပြတင်းပေါက်လွှတ်တင် "ရွေးချတစ်ဦး video file ကို"။ အရာဝတ္ထု extension ကို MKV နှင့်အတူတည်ရှိရာဧရိယာထဲမှာသူ့ကိုသွားပါ။ Selection ကိုအောင်အသုံးပြုပုံစာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
ရွေးချယ်ထားသောဗီဒီယိုလမ်းကြောင်းကိုလယ်ပြင်၌ပြသသွားမည် "ပြောင်း File"။ အခုတော့ tab ကို "Format ကို" Konvertilly ကျနော်တို့အချို့သောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။ လယ်ပြင်၌ "Format ကို" အဆိုပါတိုးချဲ့စာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ "က AVI".
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုလုပ်ငန်းများ၌ဗီဒီယိုနေရာတစ်ခုတည်းနဲ့ source code ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Konvertilly အတွက် interface ကို၏အောက်ခြေတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်လမ်းကြောင်းကို Save "File"။ သူသည်သင်တို့ကိုကျေနပ်အောင်မပါဘူးဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ field ရဲ့ဘယ်ဖက်မှဖိုင်တွဲ၏အောရှိခြင်းအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖွင့်ဖို့ Directory ကိုရွေးချယ်ရေးပြတင်းပေါက်။ ဒါဟာပြောင်းလဲခြင်းပြီးနောက်ပြောင်းလဲဗီဒီယိုကိုပေးပို့ဖို့ဆန္ဒရှိသော hard drive ကို၏ဧရိယာရွှေ့ပါ။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
သင်တို့သည်လည်းအချို့သောအပိုဆောင်းချိန်ညှိမှုများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အမည်ရဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်။ သင်တို့သည်ဤသဘောတရားများမှာအလွန်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည်အဲဒီ settings တွေကိုမထိဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လယ်ပြင်၌အပြောင်းအလဲများလုပ်လိုပါက "အရည်အသွေး" drop-down list ထဲက, တန်ဖိုးပြောင်းလဲသွား "ကနဦး" အပေါ် က "Other"။ အမြင့်ဆုံး - ဒါဟာနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကို, လက်ျာဖြစ်သောလက်ဝဲဘက်အပေါ်တစ်ဦးစကေးအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ မောက်အသုံးပြုခြင်း, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိမ့်ချကျင်းပရန်မိမိတို့အဘို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြောင်းအရည်အသွေးအဆင့်ဖို့ slider ကိုရွှေ့။
ဒါဟာပြောင်းလဲဗီဒီယိုထဲမှာသငျသညျကို select မြင့်အရည်အသွေး, image ကိုပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်ကိုထမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ, အပိုကြီးတဲ့ရလဒ်ဖိုင်အလေးချိန်မည်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချိန်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် optional ကို setting ကို frame ကိုအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လယ်ပြင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Size ကို"။ ပေါ်လာသော list ကနေ, အပြောင်းလဲသွား "ရင်းမြစ်" သငျသညျသငျ့လျြောသောထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဘောင်အရွယ်အစား၏တန်ဖိုးအပေါ်။
အားလုံးလိုအပ်သောအပြင်အဆင်များထားကြပါတယ်ပြီးနောက်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြောင်း".
ဒါဟာ DivX က AVI မှ MKV မှဗီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကစတင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏တိုးတက်မှုများကိုတစ်ဦးသော graphical ညွှန်ပြချက်သုံးပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုပြသပါတယ်။
အသွင်ပြောင်းပြသကမ္ပည်းပြီးသွားတဲ့နောက် "ကူးပြောင်းခြင်း Completed"။ အရာဝတ္ထုပြောင်းရွှေ့ဖို့, လယ်ပြင်၏ညာဘက်တစ် directory ၏ပုံစံအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "File".
စတင် ဉီးစီး AVI ဗီဒီယိုပြောင်းလဲရာအရပ်တွင်။ ယခုတွင်သင်သည်တစ်ခုကိုရှုမြင်ရွှေ့သို့မဟုတ်အခြား application များကို အသုံးပြု. တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
Method ကို 3: ဟမ်းစတားအခမဲ့ Video Converter
AVI မှ MKV ဖိုင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲအခြားအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ, ကြွက်အခမဲ့ Video Converter ဖြစ်ပါတယ်။
ဟမ်းစတားအခမဲ့ Video Converter ကို run ။ လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုထည့်သွင်းခြင်းအဖြစ် Convertilla ဖို့လုပ်ရပ်တွေကို, သင်ကနေဆွဲယူခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် ဉီးစီး အဆိုပါ converter box ထဲမှာ။
သင်တစ်ဦးဝင်းဒိုးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်စွက်လုပ်ဆောင်ချင်လျှင်, နှိပ် "ဖိုင်များ Add".
ကိရိယာတစ်ခုကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းတံဆိပ်ကပ်, ပစ်မှတ် MKV တည်ရှိရာအရပ်ဒီဝင်းဒိုးကိုရွှေ့နှင့်အတူ "ပွင့်လင်း".
တင်သွင်းအရာဝတ္ထု၏အမည်ပြတင်းပေါက်အခမဲ့ Video Converter ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ဝင်းဒိုးကိုကို formats နှင့်ဦးတည်ရာ devices တွေကိုပြေး။ ပြတင်းပေါက်၌အုပ်စု icon များ၏အောက်ဆုံးမှလှိမ့်ပိုင်ခွင့် - "Formats နှင့်ကိရိယာများကို"။ အဆိုပါလိုဂိုနှင့်အတူအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "က AVI"။ သူမသည်ဤအပိုင်းကိုအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းချိန်ညှိမှုများနှင့်အတူပွင့်လင်းသောဧရိယာ။ အောက်ပါ parameters များကိုဤနေရာတွင်ထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်:
frame rate ကို;
flow rate ကို;
audio setting များကို (ချန်နယ် codec, စီးဆင်းမှုနှုန်းနမူနာနှုန်းသည်) ။
သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌မဆိုအထူးတာဝန်များကိုတန်ဖိုးရှိမပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သငျသညျဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့ကိုစွန့်ခွာ, အဲဒီ settings တွေကိုနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်သင်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်အပြောင်းအလဲများလုပ်ပေးသို့မဟုတ်ခလုတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကလစ်နှိပ်ဖွင့်ဖို့, မလုပ်ခဲ့ဘူးရှိမရှိ၏ "ပြောင်း".
စတင် "Folder ကိုများအတွက် Browse"။ က, သင်ပြောင်းလဲဗီဒီယိုကိုပေးပို့, အဲဒီနောက် folder ကို select လုပ်သွားကြသည်သောဖိုင်တွဲတည်ရှိရာပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ".
ပြတင်းပေါက်အခမဲ့ Video Converter အတွက်အသွင်ပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးပြီးနောက်ကအကြောင်းအသိပေးခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ AVI format နဲ့အတွင်းပြောင်းလဲဗီဒီယိုကိုတည်ရှိရာနေရာ, စာနယ်ဇင်းဖွင့်လှစ် "ပွင့်လင်း Folder ကို".
ဉီးစီး ဘယ်မှာအထက်ဖော်ပြပါအရာဝတ္ထုအတူတူ directory ထဲတွင်ပြေး။
Method ကို 4: မဆို Video Converter
ဤဆောင်းပါး၏တာဝန်ဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်းနောက်ထပ်လျှောက်လွှာ, အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အတူတစ်ဦး paid version အဖြစ်တင်ဆက်မဆို Video Converter ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအရည်အသွေးမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းအစုတခုများအတွက်လိုအပ်သမျှရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Ani Video Converter ကိုစတင်ပါ။ MKV အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အနိုင်ပါတယ်အများအပြားနည်းစနစ်ထည့်ပါ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာထွက်ဆွဲယူဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ဉီးစီး မဆို Video Converter ၏ပြတင်းပေါက်၌အရာဝတ္ထု။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကို click နိုင်ပါတယ် "files တွေကို Add သို့မဟုတ်ဆွဲယူ" ပြတင်းပေါက်၏ဗဟို၌, ဒါမှမဟုတ်လုပ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဗီဒီယို Add".
ထို့နောက် video window ကိုတင်သွင်းစတင်ပါ။ ပစ်မှတ် MKV တည်ရှိရာသွားပါ။ အရာဝတ္ထုယင်းသည်, စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
ရွေးချယ်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကို၏အမည် Ani Video Converter ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဗီဒီယိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲခြင်း၏ညှနျကွားညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။ ဤကွက်လပ်၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကို Select လုပ်ပါ"ခလုတ်ကို၏လက်ဝဲမှ "ပြောင်း!"။ ဤနယ်ပယ်တွင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါဟာပုံစံများနှင့်စက်ကိရိယာများ၏ကြီးမားသောစာရင်းပေးထားပါတယ်။ လျင်မြန်စွာ, လိုချင်သောအနေအထားအတွက်စာရင်း၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းကကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ "ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ" ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ frame ရဲ့ပုံစံ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ယူနစ်ကိုတိုက်ရိုက်ယူပါလိမ့်မည် "ဗီဒီယို Formats"။ မာကုစာရင်းထဲတွင်အနေအထား "စိတ်ကြိုက်က AVI Movie, (* .avi)".
သင်တို့သည်လည်းပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် default settings ကိုအချို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပိုင်းတွင်ပြောင်းလဲဗီဒီယိုသီးခြား directory ထဲတွင်ပြသနေသည် "မဆို Video Converter"။ က output directory ကို reassign မှအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြေခံပညာ Settings" ကို။ ဒါကအခြေခံယူနစ်အစုတခုဖွင့်လှစ်။ ဆန့်ကျင် option ကိုတွင် "Output directory ကို" တစ်ဦး Catalog ၏ပုံစံအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ် "Folder ကိုများအတွက် Browse"။ သငျသညျဗီဒီယိုပို့ချင်ရာအရပ် Specify ။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ".
ဆန္ဒရှိလျှင်, setting ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု "ဗီဒီယို settings ကို" နှင့် "အသံက Settings" သင်က codec, ဘစ်နှုန်း, ဘောင်နှုန်းနှင့်အော်ဒီယိုချန်နယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ settings တွေကိုလုပ်သာသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်ဘောင်နှင့်အတူအထွက်က AVI file ကိုရရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်သောဖြစ်ရပ်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင်အဲဒီ settings တွေကိုမထိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ဘောင်, စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ထားကြသည် "ပြောင်း!".
, ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျရာခိုင်နှုန်းနှင့်တစ်ဦးသော graphical ညွှန်ပြချက် အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်တိုးတက်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်။
ပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်စသတ်နေသည်ပြီးတာနဲ့ပြတင်းပေါက်မှာအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ် ဉီးစီး ယင်းလုပ်ငန်းများ၌အရာဝတ္ထုက AVI format နဲ့ထားရှိရာ directory ထဲတွင်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုအခြား format နဲ့ဗီဒီယိုပြောင်း
Method ကို 5: Format ကိုစက်ရုံ
ကျနော်တို့ Format ကိုစက်ရုံအစီအစဉ်ကို၌ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ AVI ဖော်ပြချက်မှ MKV converting ၏နည်းလမ်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချ။
အဆိုပါ Format ကိုစက်ရုံကလစ်စတင်ပြီးနောက် "က AVI".
က AVI format နဲ့ window ကိုကူးပြောင်း settings ကိုပြေး။ သငျသညျအဆင့်မြင့်ဆက်တင်ကိုသတ်မှတ်ချင်လျှင်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ".
အဆင့်မြင့်ဆက်တင်တဲ့ window ကိုရှိပါတယ်။ လုပ်နိုင်သောအသံနှင့်ဗီဒီယို codec, ဗီဒီယိုအရွယ်အစား, နည်းနည်းမှုနှုန်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ရှိပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲတွေ, လိုအပ်ကြောင်း၏အမှု၌, စာနယ်ဇင်းထားကြပါတယ်ပြီးနောက် "အိုကေ".
အရင်းအမြစ်ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အဓိကပြတင်းပေါက်က AVI settings ကိုပြန်နှိပ်ပါ "ဖိုင်ကို Add".
သငျသညျအသွင်ပြောင်းချင်သော hard drive ကို MKV အရာဝတ္ထု Locate, ကအထိမ်းအမှတ်နှင့်စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
ဗီဒီယို၏အမည် Preferences ကို window တွင်ပြသနေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အပြောင်းလဲဖိုင်ပို့ခြင်းအထူး directory ထဲတွင်လုပ်ပါလိမ့်မည် "FFOutput"။ သင်အရာဝတ္ထုအပြောင်းအလဲနဲ့နောက်သို့စေလွှတ်လိမ့်မည်ရှိရာ directory ကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်လျှင်, လယ်ပြင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Destination Folder" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေ၌တည်၏။ အဆိုပါတိုးချဲ့စာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ "Folder ကို Add ... ".
ပြတင်းပေါက် directory ကိုကြည့်ရှုခြင်းလည်းမရှိ။ ပစ်မှတ်သည် directory နှင့်ကလစ် Specify "အိုကေ".
ယခုတွင်သင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒီစာနယ်ဇင်းလုပ်ဖို့ "အိုကေ" က Settings window ထဲမှာ။
အဓိက window ကိုပြန်, အကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောတာဝန်များ၏အမည်, နှင့်စာနယ်ဇင်းကို select "Start".
က box ထဲမှာ, ပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် "အခြေအနေ" task ကိုအမည်ဖြင့်ပြသတန်ဖိုးကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ "ပြီးပြီ".
ထိုပြဿနာများ၏အမည်ပေါ်တွင်ဖိုင်ကို directory ကိုကလစ်၏တည်နေရာကိုသွား PKM။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ဟုအဆိုပါဦးတည်ရာ folder ကိုဖွင့်ပါ".
အဆိုပါ စူးစမ်းသူ အဆိုပါပြောင်းလဲသောဗီဒီယို် directory ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့များစွာကဒီဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲထောက်ခံပါတယ်ဗီဒီယို converter ကိုရာပေါင်းများစွာသောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိပါတယ်အဖြစ်, AVI format နဲ့မှ MKV ဗီဒီယိုများပြောင်းဖို့မအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ options များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်အားကြီးပေါင်း (Xilisoft Video Converter နဲ့ Format ကိုစက်ရုံ) မှ (Convertilla) သည်အခြေခံအကျဆုံးအနေဖြင့်စတင်, ဒီတာဝန်လုပ်ဆောင်သောလူကြိုက်အများဆုံး applications များ၏ဖော်ပြချက်ဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူ, ပြဿနာရဲ့အတိမ်အနက်ပေါ်မူတည်ပြီး, တစ်ဦးအလားအလာ option ကိုကူးပြောင်းနေတဲ့အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်အတွက်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောရှေးခယျြခဲ့သူ့ဟာသူအဘို့ကိုရွေးပါနိုင်ပါလိမ့်မည်။